Indlela yokondla umntwana ukusuka kwibele ngokuchanekileyo
Iminyaka yokuqala ye-2-3 yobomi bomntwana iboniswe ngokuphuhliswa kwakhe okuqhubekayo kwamakhono engqondo nangokwenyama. Kuyaziwa ukuba isondlo sendalo ngeli xesha libhekwa njengokutya okulungileyo. Abo bantwana abafumana ubisi lwebele ngaphambi kweminyaka engama-1 nangaphezulu, ngokuzayo banxibelelana ngokusondeleyo nomama wabo, baninzi bahlala begula, bavulekile kwaye banobungane.
Kukho imibono eyahlukileyo malunga nexesha lokuncelisa. Abanye oogqirha kunye nababelethi benkokeli bakholelwa ukuba umntwana kufuneka athole ubisi kumama ngokukhawuleza, njengoko kungenakuxabiseka, abanye bakholelwa ukuba ukuncelisa kubalulekile kwiinyanga ezintandathu zokuqala, kwaye umama uyazikhethela ukuba uyaqhubeka okanye cha. Ukongezelela, kukho imbono yokuba amantombazana kuphela kufuneka ancelise iminyaka engaphezu kwe-2 - abafana banokukhula ixesha elide besuka ebuntwaneni, xa beqhubeka bebelelwa ngaphezu kweminyaka emibini.
Kodwa kungekudala kufika ixesha apho kubalulekile ukuyeka ukuncelisa iintsana zabo. Ngokwemvelo, eli xesha alinqunywanga ngumntwana, kodwa ngumama, okhutshwa kwiimeko zangaphandle. Kodwa akusoloko kusilula kumntwana uhamba ngokwemvelo, ngamanye amaxesha kubangela ukuba uxinzelelo lomntwana. Kwenzeka ukuba ukuba umama kuzisa iimvakalelo ezingakumbi. Masithembele ukuba sinokunika isiluleko esinobulumko malunga nendlela yokondla umntwana ngokuchanekileyo.
Kukulungele ukuba umntwana wakho usetyenziswe kwibele ngokuphindwe kathathu ngosuku. Oku kuya kunceda ukhula oluncinci oluvela esifubeni. Ukuba umntwana usetyenziselwa izihlandlo ezimbalwa (emva kokusondla ebhotile, ekuvukeni), kwaye ebusuku ubuthongo, ngoko ulungele ukukhutshwa ngaphandle kokuncelisa. Kubalulekile ukuba kungekhona kuphela umntwana wakho, kodwa kufuneka ulungele ukucutswa kwibele.
Umama kuya kufuneka ahlupheke xa umntwana ekhulelwa ekunceliseni ibele ngexesha lokutya okuzinzile, okuhambelana nokuxhamla ubisi kwimida yeentlanzi zamathambo, kubalulekile ukubonakalisa ubisi ngezikhathi ezithile, mhlawumbi ukuveliswa kwe-mastitis. Akukho mfuneko ngeli xesha ukukrazula isifuba - ukujikeleza kwegazi kwiingcambu ezincinci ziphukile, iidonti zivaliwe - oku kwenza ukuba iimvakalelo ezingathandekiyo zibi. Ngenxa yokuphuhliswa okuqhubekayo kwe-edema, ukuvuvukala kwebele kungathabatha ifom ekhulelwe. Unokuyiphephekisa ingxaki enjalo kunye neengcambu ze-mammary, ukuba uqala ukucothula umntwana esifuba ngexesha lokuvota. Ngokusemthethweni wena nomntwana wakho uya kuba, ukuba ufumana isincomo esivela kwi-gynecologist yakho. Ngethuba lokutya, unokukuncedwa ngamachiza akhethekileyo ogqirha ugqirha kwaye unike iingcebiso malunga nokuphepha ukuvakalelwa okungathandekiyo.
Ukuba umntwana uyagula okanye aphinde abuyele, akukhuthazwa ukuba aqale inkqubo yokucoca. Kwakhona, ungaqali ukuxothwa, xa kukho utshintsho ebomini, kwaye ngoko ke umntwana: utshintsho lokuhlala, ixesha apho umama elungiselela okanye sele sele eza kusebenza. Ukuze ufumane ukusuleleka kwintsholongwane, ukumisa umntwana ekusebenziseni kwisifuba akufanele kuqale ngexesha lehlobo.
Unokuqala ukugxazela umntwana, ukutshintsha kunye nezinye iinkqubo - ukudlala, ukutya - ngokuthe ngcembe uya kufezekisa umda wendalo. Umama unokunikezela ukuba anikezele umntwana wakhe omdala ixesha elithile kamva ukuba angamthabatha umdlalo-umdlalo, ukudanisa, ukhangele ngefestile (ifowuni yakho iyaqhubeka uluhlu). Zisoloko uzifumana umsebenzi, ubuncinane obonwabisayo, ukuze umntwana akwazi ukwenza lula ngoku "lula". Zama ukugqoka iimpahla ezifanelekileyo, ngoko umntwana uya kufumana nzima kunokuba ufikelele. Kancinci, umnqweno wengane ekuxhaseni kwisifuba siya kuphelisa, kwaye unokuziphazamisa phambi kwakhe.
Shintsha umkhuba wokubeka umntwana wakho. Vumela ugogo okanye ubaba makwenze oko. Ukubuyisela ukuncelisa i-milk formula, i-kefir okanye ubisi lwakho obonakalisiweyo. Kuyafaneleka ukuqala ngokutshintsha ibhotile kunye nobisi, ngokuthe ngcipheko ukunciphisa inani lokubeka umntwana kwisifuba. Abantwana abadala abakhulileyo bangatsho ukuba umama ukhathele kwaye sele sele elele, okanye uzame ukushiya isikhalazo somntwana kwelinye igumbi, ekuthiwa ucima isitofu, hlamba izitya xa ugogo okanye ubaba engekho. Njalo xa ukwandisa ixesha lokuxothwa, kwaye kungekudala emva kokubuya kwelinye igumbi, uya kubona indlela umntwana onokuphumla alala ngayo ngokuthula nangokuthula.
Vumela umntu kwizalamane zakho ukuba athathe indawo yakho ngobusuku obuvusa umntwana. Qhubeka! Uya kufuneka uhlambele ubusuku obuthile, kodwa kungekudala ubusuku bakho abuyi kulufuna isifuba somama. Kwaye xa umntwana efuna ukusondla esifubeni sakhe, unokumbamba, uthi umama uyavuka futhi "esalala".
U-Ottuchayte umntwana wakho ebusweni bakho obuhlala naye - abahlala bengaboni umntwana, bashiye ixesha kunye nabazali. Umkhwa wokusebenzisa kwibele lomama uya kuphuma ngokwawo. Kwaye ukuba umntwana ukhumbula le nto, unokuza neengxabano ezahlukahlukeneyo, ezifana, umzekelo, ubisi lomama alukho mnandi njengoko kwakunjalo ngaphambili.
Akunakwamkelwa ngokupheleleyo iindlela zokugxaba, njengokugubungela isifuba ngento engathandekiyo kwintetho! Emva kwakho konke, isifuba sikamama ngunyana ngumgcini-mboleko wokuthembeka nokuthula, xa umntu evakalelwa ukhuseleko olupheleleyo. Musa ukuphulaphula isiluleko esivela kubantu abangenalo ikhono kwimiba yengqondo yokusebenzisana komntwana nonina.
Abanye bacetyisa ukufanisa isifuba ngokufaka ibhotile ngokubonisa ubisi ngaphantsi kwefestile. Okanye ufake iingubo zobomvu phezu kwesifuba, uthi ubisi luya kuba ikati. Ngamanye amaxesha iindlela ezinjalo ziyasebenza.
Hugqa umntwana wakho ngokuqhelekileyo kunokuba uqhelekileyo, wugxininise ngexesha lokulila, kuba eli lixesha elixinzelelekileyo kumntwana wakho. Kwenzeka ukuba ngokuxothwa ngokukhawuleza, umntwana uzama ukwenza inkqubo yokuziphatha kunye nemikhwa efanayo - uqala ukunamathela iingubo zeengubo, iminwe yakhe, ukubonakala komntu. Uya kufuneka uhlawule ixesha lakho nemigaqo ngenxa yezinto ezilungileyo zentsana yakho. Uzakufuna umonde omkhulu kumsebenzi onzulu, kodwa okwethutyana, umphumo wokuba uya kuba ngumvuzo wakho nomntwana wakho
I-fat fat content of milk
Luhlobo luni lokutya lokukhetha umntwana
Uphuhliso kunye nolawulo lwemini yomntwana kwiinyanga ezili-8
Iindlela ezili-10 zokwenza umona onomona
Ukucima ngomoya nangelanga
Ukuthandana okufutshane: i-female orgasm
Ucinga ukuba ngubani lo mfana? Lo ngumdlali onqabileyo kakhulu wekhulu lama-XXI eRashiya
Ita ngeapulo kunye nesinamoni
Indlela yokubopha i-cardigan kunye neenaliti zokudibanisa
Indlela yokutya umntwana ongenasiphelo?
I-cookie yomtshato kwindlela yaseMexico